एक गिलास रगत, लेखक र मालिक | चितवन पोष्ट दैनिक
एक गिलास रगत, लेखक र मालिक
२०७१ फाल्गुन २८, बिहीबार ०१:४३ गते
साङ्ला नामको प्राणीबाहेक अरु प्राणीको रगत रातो हुन्छ भनिएको छ । साङ्लाको रगतचाहिँ सेतो हुन्छ । रगत प्राणीको शरीरभित्र नसाको माध्यमबाट बग्ने यस्तो तरल पदार्थ हो, जसको अनुपस्थितिमा कुनै पनि प्राणीको जीवन कल्पना गर्न सकिँदैन । रगतबिना जीवनको कल्पनै गर्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ हुन्छ– “रगतजत्तिको मह¤वपूर्ण त¤व प्राणी जगतका लागि अरु हुनै सक्दैन ।”
दुनियाँका बडेबडे वैज्ञानिकहरुले हवाईजहाज बनाए, कम्प्युटर, मोबाइल, टेलिफोन, परमाणु बम बनाए । आविष्कारको हकमा अनेक थरी रोगका विरूद्ध ओखती पनि बनाए । एउटाको कलेजोको टुक्रा काटेर अर्काको शरीरभित्र पनि टाँसे । आन्द्रा काटेर लामो–छोटो पनि बनाए । एउटाको मृगौला अर्काको ज्यानभित्र पनि जोडे । हुँदाहुँदा संसारमा असम्भवजस्तै ठानिएको मुटु पनि प्रत्यारोपण गर्न सफल भए । अब आविष्कारको मात्रै चर्चा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने हप्तामा एकपटक लेखिने लेखको साइजवाला लेख होइन, एउटा सानोतिनो महाभारत नै निर्माण हुन जान्छ । त्यसकारण, त्यति धेरै उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्न जरूरी छेैन । यति भनिदिएमात्रै काफी छ कि यो कलियुगका बैज्ञानिकहरुले धेरैभन्दा धेरै चीज उत्पादन र आविष्कार गरे । तर, मान्छेको शरीरभित्र बग्ने रगत बनाउन आजसम्म सकेका छैनन् । यसको विकल्पमा प्रयोग हुन सक्ने त¤व पनि आजसम्म उत्पादन वा बनाउन सकेका छैनन् । अनुमान लगाउने स्वतन्त्र अधिकारको पूरै प्रयोग गरेर अनुमान लगाउँदा भन्न सकिन्छ, सायद् मानवजीवन धारण गर्ने कसैले पनि रगत बनाउन सक्ने छैनन् वा यसको विकल्पमा कुनै झोल पदार्थ प्रयोग गर्न सक्ने छैनन् । अनन्त कालसम्म रगत बनाउन सक्ने छैनन् । कसैले पनि सक्ने छैनन् । यसरी, यस्ता कारणहरुले रगतको मूल्य र मह¤व निकै माथि छ । सधैँभरि रहिरहने छ ।
लेखक त्यो मान्छे हो, जसले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना मनमा उब्जिएका विचार र धारणाहरुलाई प्राणीहितमा केन्द्रित गरेर अक्षरहरु बुन्छ र शब्द निर्माणमार्फत बांगोटिंगो हिँडेको समाज र राष्ट्रलाई सोझ्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्छ । दुनियाँमा गाह्रोमध्येको एउटा गाह्रो काम हो, लेखाइ । ढंग पु¥याएर सकारात्मक निष्कर्ष निकालेर प्राणीहितमा विचार निर्माण र प्रवाह सजिलो नहुने भएकैले यतिविघ्न कठिन काम गर्न मान्छेहरु रूचाउँदैनन् । यसैको कारण हो– नेपालमा मात्रै होइन, संसारमै लेखकहरुको संख्या अति न्यून छ ।
चीनमा जनसंख्या कति छ, त्यसको जानकारी गुगलमा सर्च गर्दा थाहा पाइन्छ । त्यही गुगलमा सर्च गर्दा थाहा हुन्छ, चीनमा कति जना लेखकहरु छन् । भारत, अमेरिका र विश्वका विकसित, अतिविकसित, अल्पविकसित वा अविकसित मुलुकहरुमा लेखकहरुको संख्या कति छ । नेपालकै चर्चा गर्दा यो देशमा कति छ, लेखकको संख्या ? चितवन पोष्ट दैनिकका ज्यादा पाठकहरु चितवन जिल्लामै भएको हुँदा टाढाको कुरा छाडेर चितवनकै सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्ने हो भने पनि पत्तो लाग्छ कि यो जिल्लामा लेखकहरुको संख्या कति छ ? पाँच जना लेखकहरुको नाम लिएपछि छैटौँ नम्बरमा जान कठिनाइ हुन्छ । छैटौँको नाम लिएपछि सातौँको नाम लिन आधा घन्टा लाग्छ र १५ पु¥याउन दिनभरि सोच्नुपर्छ । जब कि, यो जिल्लामा यतिबेला कम्तीमा सात लाख मानिसहरुको बसोबास रहेको छ ।
मालिक त्यो हो, जसको नेतृत्वमा कुनै पनि चीजको उत्पादन वा निर्माण वा खरिद र बिक्रीको कार्य हुन्छ, जसले पुँजी लगानी गरेको हुन्छ । लगानीकर्ता मालिक हो, चाहे त्यो मालिकले २ सय रूपैंयाँमात्रै लगानी गरेर नाङ्लोमा चकलेट र सुपारी बेच्न बसेको किन नहोस् । करोड वा अरब रूपैयाँ लगानी गर्ने मालिक, दुई–पाँच सय रूपैयाँ लगानी गर्ने पनि मालिक । विभिन्न खाल, रुप र आकारका मालिकहरुमध्ये यतिबेला पत्रिका आफ्नो नाममा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई मालिकको संज्ञा दिइएको छ, जसलाई यहाँ विशेष रुपले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
अब गाँठी कुराको सुरूवात यहाँबाट हुन्छ । पत्रपत्रिकामा विचार स्तम्भ हुन्छ । संसार विचारले चल्छ, समाचारले चल्दैन । समाचार बन्न लामो समय लाग्दैन, विचार निर्माण हुन धेरै समय लाग्छ र त्यही विचारका आधारमा, त्यही विचारलाई पछ्याएर संसारका मान्छेहरुले आफूलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउँछन् । कार्लमाक्र्सले विचार लेखेका थिए, समाचार होइन । गौतम बुद्धले पनि प्राणीहितलाई केन्द्रित गरी विचार निर्माण गरेका थिए, समाचार लेखेका थिएनन् । समाचारको आफ्नै खालको मह¤व हुन्छ, तर यो निकै चाँडो पुरानो हुन्छ । यसको आयु तुरून्तै समाप्त हुन्छ । समाचारको आयु एक सेकेन्ड वा बढीमा सुन्ने बेलासम्म मात्रै हो । सुनेपछि समाचारको आयु समाप्त हुन्छ, तर विचारको आयु लाखौँ वर्षसम्म हुन सक्छ । त्यसकारण, हरेक पत्रपत्रिकाले विचार प्रवाहका लागि स्थान निश्चित गरेका हुन्छन् । कसैकसैले विचार स्तम्भको मह¤व नबुझेर वा विचार निर्माण गर्ने मान्छेको अभावका कारण बिनाविचार पृष्ठ नै पत्रपत्रिका छापेर बजारमा पठाएका पनि देखिन्छन् । यो अवस्थालाई धेरै शब्द खर्च गरेर व्याख्या गरिरहन पर्छजस्तो लाग्दैन । एउटा कोणबाट निस्किने निष्कर्ष यो हो कि पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एक वा दुईवटा विचार अटाएको हुनैपर्छ, नभए पनि चित्त बुझाउने, बुझाइने बेग्लै पाटो हो । अब घुमाएर लेख्न जरूरी छैन, सीधा लेख्न कतैबाट छेकबार पनि छैन ।
सीमित संख्यामा रहेका लेखकहरुले पत्रपत्रिकाहरुमा सामान्य अनुरोधका आधारमा आफ्नो जीवनको मह¤वपूर्ण समय खर्च गरेर लेखिरहेका छन् । विचार निर्माण गरेर समाज र राष्ट्रलाई अदृश्य तरिकाले डो¥याइरहेका छन् । कुनै राजनीतिक दल वा संघसंगठन वा व्यक्ति विशेषको प्रभावमा परेर आफ्नो इमानलाई बेच्ने वा बन्धकी राख्ने लेखकहरुलाई यहाँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छैन । लेखक हुन्, लेखिरहेका छन् । पसिना बगाएर लेखिरहेका छन् । पसिना रगतकै अर्को रुप हो । अर्थात्, पसिना रगतबाटै बन्छ । पसिना रगतबाटै बन्ने भएको हुँदा पसिना रगतै हो । एउटा लेख लेख्न, एक पेजको विचार स्तम्भ एक हजारभन्दा बढी शब्द निर्माणद्वारा मात्रै भरिन सम्भव हुन्छ । यति लेख्न कम्तीमा तीन घन्टाको समय लाग्छ । लेख्नका लागि रगत र पसिना बग्छ । समय, मेहनतरुपी रगत, पसिना बगेकै हुन्छ । तर, घोर विडम्बना ! यसरी रगत र पसिना बगाएर विचार निर्माण गर्ने लेखकहरुलाई पत्रपत्रिका प्रकाशकहरुले बिनापारिश्रमिक दास बनाएका छन् । प्रायः सबै प्रकाशकहरुले दास बनाएका छन् । कसैकसैले पारिश्रमिक दिएका छन्, तर बढीमा एक सय रूपैयाँ । खुबै बढी दिनेले एउटा लेखको तीन सय रूपैयाँसम्म दिएका प्रमाण भेटिन्छ । जब कि, अजङको साइजमा निस्किने पत्रिकामा विज्ञापन दर भने एक इन्च वा दुई इन्च साइजको विज्ञापन छपाइ मूल्य एक हजारभन्दा कम हुँदै हुँदैन । एकातर्फ आधा पेजभन्दा ज्यादा बढी आकार ओगट्ने विचार पृष्ठ लेख्नेलाई पारिश्रमिक नदिने, दिए पनि बढीमा तीन सय रूपैयाँ दिने र अर्कोतर्फ सानो आकारको विज्ञापनको मूल्य एक हजार लिने । एउटा सानो विज्ञापनबराबरको रकम लेखकलाई पारिश्रमिक दिँदा कुनै कोणबाट पनि प्रकाशक अर्थात् मालिकलाई नोक्सानी हुँदैन भने त्यो हदसम्म पारिश्रमिक दिनुपर्छ कि पर्दैन ? नदिएको अवस्थालाई पत्रिका प्रकाशक मालिकले विचार निर्माण गर्ने लेखकलाई शोषण गरेको हो कि होइन ? मालिक प्रकाशकले नोकर वा दास वा लेखकरुपी प्राणीको रगत पिएको हो कि होइन ?
समाचार संकलन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारकर्मीले पारिश्रमिक पाउँछ, पत्रिका वितरकले पाउँछ, कम्प्युटर अपरेटरले पाउँछ, कार्यालय सफा गर्ने वा चिया बोकेर ल्याउनेले पारिश्रमिक पाउँछ भने विचार निर्माण गरेर संसारलाई जीवन्त रुपमा अघि बढाउन सहयोग गर्ने लेखकहरुलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ कि पर्दैन ? दिए पनि झारा टार्ने किसिमले नाममात्रैको दिने हो कि साँच्चैकै पारिश्रमिक दिएर सम्मान पनि गर्ने हो ? एक–दुई दिनको पारिश्रमिकको हिसाब एक–दुई चम्चा रगत होला । महिनौँ वा वर्षौंसम्म बिनापारिश्रमिक लेखकहरुलाई जोताइरहनु कम्तीमा एक गिलास रगत पियाइ होइन ? मालिक महोदयहरु ! पत्रिका प्रकाशन आफैँमा कठिन र चुनौतीपूर्ण छ, यो सत्य हो । यति भइकन लेखकको मात्रै रगत पिउने काम त मानवअधिकार हनन्को उच्च रुप पनि हो कि ? लेखकहरुको रातो रगतको पनि सम्मान गर्न सिक्ने पो हो कि ?